WAA MAXAY MAALIYAD QOF? DUGSIGA, IYO SIDEE U SHAQAYSAA?
Bogga ugu weyn WAA MAXAY MAALIYAD QOF? DUGSIGA, QEEXIDA IYO SIDEE U SHAQEEYSAA?
WAA MAXAY MAALIYAD QOF? DUGSIGA, QEEXIDA IYO SIDEE U SHAQEEYSAA?
Isha sawirka: maalintan ganacsiga
Waa maxay Maaliyadda Shaqsiga?
Ma u baahanahay Maaliyad Shaqsiyeed?
Waa maxay Xeeladaha Maaliyadeed ee Shakhsiyeed?
1. Samee miisaaniyad
2. Abuur sanduuq degdeg ah
3. Xaddid deynta
4. Si fiican u isticmaal kaararka deynta
5. La soco dhibcaha dhibcahaaga
6. Tixgeli qoyskaaga
7. Bixinta amaahda ardayga
8. Qorshee (oo keydi) hawlgabka
9. In la kordhiyo jebinta cashuurta
10. Sii nasiino
Sideed wax uga baratay Maaliyadda Shaqsiga?
#1 Blogyada Internetka
#3 Fasallada Online -ka ah ee Bilaashka ah
Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo Waa Maxay Maaliyadda Shaqsiga?
Markaad maqasho maaliyad shaqsiyeed, waxa ugu horreeya ee malaha maskaxdaada ku soo dhacaya waa inay la xiriirto lacag. Waad saxantahay. Maaliyadda shakhsi ahaaneed waa inay ku samaysaa lacagtaada sida la xiriirta bangiyada, kaalmada ama deynta, amaahda, suuqyada raasumaalka, iyo maalgelinta.
Asal ahaan, waxaa loola jeedaa habka maareynta lacagtaada. Maaliyadda shakhsiga ayaa aad muhiim ugu ah nolosha qof walba. Inaad awood u yeelato inaad si hufan u maamusho dhaqaalahaaga ayaa faa'iido badan kuu yeelan doonta mustaqbalka fog.
Miyaad ka mid tahay dadka lacagta garaaca ka hor intaysan xitaa soo gelin bangigooda? Miyaad qabtaa baahiyo joogto ah oo aan dhammaad lahayn oo aan waligood u muuqan inay dhammaanayaan oo aakhirka aadan haysan wax dheeraad ah? Miyaad la dhibtoonaysaa caadooyinkaaga qorshaynta iyo kaydinta?
Maqaalkani wuxuu si cad u faahfaahinayaa waxa ay tahay maaliyadda shaqsiyeed, sida ay u shaqayso iyo sida ugu fiican ee aad si hufan u maareyn karto maaliyaddaada. Diyaar ma u tahay in lagu iftiimiyo? Akhriska sii wad.
Maaliyadda shaqsiga ah waxay ku lug leedahay maareynta lacagtaada iyo sidoo kale kaydinta iyo maalgelinta.
Maaliyaddaada shakhsi ahaaneed ayaa laga yaabaa inay la xiriirto buuxinta yoolalkaaga maaliyadeed, hubinta inaad haysato ku filan baahiyaha muddada-gaaban adiga oo weli isu diyaarinaya xaaladaha degdegga ah ee muddada-dheer iyo suurtagalka ah, qorshayaasha hawlgabka, amaahda guryaha, iyo waxbarashada waxbarashada kulliyadda ilmahaaga.
Sida aad ugu guulaysan lahayd maaliyaddaada shaqsiyeed waxay ku xidhan tahay dakhligaaga, kharashyada, shuruudaha nolosha, iyo yoolalka iyo rabitaanka shaqsiyeed iyo inaad la timaaddo qorshe aad ku fulinayso baahiyahaas ku jira caqabadahaaga maaliyadeed. Waa inaad awoodaa inaad kharash garayso wax ka yar intaad shaqaysato.
Markaad adigu maareynayso maaliyaddaada shaqsiyeed, waxaa muhiim ah inaad tahay qof aqoon u leh maaliyadda, si aad u kala soocdo talooyinka wanaagsan iyo kuwa xun oo aad u gaarto go'aanno caqli -gal ah.
Waxaad ku heli kartaa aqoontan adoo koorsooyin ku qaadanaya onlaynka ama nidaamka iskuulka ee dhaqanka ah. Habka loo maareeyo maaliyaddiisa shaqsiyeed waxaa lagu soo koobi karaa miisaaniyad ama qorshe maaliyadeed.
Akhri: Maxay Ka Dhigan Tahay Dhaqaale Gaadhi | Ma mudan tahay | Tusaha Khubarada
Maaliyadda shaqsiga ah waxay ku lug leedahay samaynta xeelado ka shaqayn doona miisaaniyaddaada, abuurista lacag degdeg ah, bixinta deynta, u isticmaalidda kaararka deynta si xikmad leh, kaydinta hawlgabka, iyo xakamaynta sababaha kale ee aad lacagta u isticmaashid.
Markaad aqoon u leedahay maaliyaddaada, waxay u badan tahay inaad taqaan sida loo maareeyo lacagtaada si habboon. Yaa aan doonaynin in lacagtooda si habboon loo maareeyo?
Markaad aqoon u leedahay maaliyaddaada gaarka ah, waxaad ku baran doontaa edbinta lacagtaada. Waxaad kaloo ogaan doontaa marka ay muhiim tahay inaad jebiso xeerarkaas aad adigu u dejisay si aad u hesho sawir ka weyn oo ka wanaagsan.
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay inuu aqoon u leeyahay maaliyadda shaqsiyeed si uu awood ugu yeesho inaad si taxaddar leh u maamusho lacagahaaga.
Akhri: Lacag intee le'eg ayay tahay inaan sameeyo: Istaraatiijiyadda Maaliyadeed ee Shaqsiga ee 2021
Waa maxay waa Xeeladaha Maaliyadeed ee Shaqsiga?
Safarkaaga xagga barashada maaliyadda shaqsiga ah, waxaa muhiim ah inaad haysato fikrad ku saabsan xeeladaha maaliyadeed ee shaqsiyeed iyo sida ugu wanaagsan ee aad ugu adeegsan karto maareynta maaliyaddaada.
Fahamka iyo si wax ku ool ah u maareynta maaliyaddaada shaqsiyeed, waxaa muhiim ah inaad dejiso miisaaniyad si aad u hubiso inaad ku nooshahay intii aad awooddo.
Markaad dejinayso miisaaniyad, waxaad kaydsan kartaa ku filan si aad u gaadho yoolalkaaga muddada-dheer. Habka miisaaniyadda ee 50/30/20 wuxuu bixiyaa qaab -dhismeed aad u wanaagsan waxaana la caddeeyay inuu u shaqeeyo si yaab badan inta badan.
Waxay ku lug leedahay- Boqolkiiba konton mushaharkaaga guriga-guriga ama dakhliga saafiga ah wuxuu ku wajahan yahay waxyaabaha daruuriga u ah nolosha, sida kirada, korontada, raashinka, gaadiidka, iyo kharashyada kale ee soo bixi kara.
Boqolkiiba soddon waxaa loo qoondeeyay kharashyada ku -meelgaarka ah, sida maqaayadda wax lagu cuno iyo dukaamaysiga dharka. Boqolkiiba labaatan waxay u socotaa mustaqbalka, bixinta deynta iyo kaydinta hawlgabka iyo xaaladaha degdegga ah.
Waxaa muhiim ah in maareynta dhaqaalahaaga gaarka ah, lacag loo qoondeeyo kharashyada lama filaanka ah, sida biilasha caafimaadka, dayactirka baabuurka weyn, ama waxyaabaha lagu hagaajiyo gurigaaga.
U fiirso sanduuqan gurmadka sidii shabakad badbaado si aad u hubiso inaadan ka waaban xaalad degdeg ah.
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee ku saabsan maaliyaddaada gaarka ah. Markaad lacag hesho, waxaad si otomaatig ah u doonaysaa waxyaabo cusub oo markaad taas samaysid, waxaa laga yaabaa inaad lacag ku dhammaato ka hor jeeggaaga cusub.
Hubi inaadan dayn ku bixin sababtoo ah sida dayntu u muuqato, waxay hoos u dhigi doontaa dhaqaalahaaga intii aad taqaan.
Sida qosolka leh ee ay u ekaan karto, kaararka amaahda ayaa ah dabin weyn oo deyn ah, laakiin waa wax aan macquul ahayn inaadan lahaan mid ka mid ah adduunka casriga ah.
Intaas waxaa sii dheer, waxay leeyihiin codsiyo ka baxsan iibsashada wax. Iyagu muhiim maahan oo kaliya inay dejiyaan qiimeyntaada amaahda laakiin sidoo kale waa hab wanaagsan oo lagula socdo kharashaadka, kaasoo noqon kara gargaar miisaaniyad weyn.
Isticmaalka kaarka deynta, oo lacag toos uga qaata koontadaada bangiga, ayaa ah hab kale oo lagu hubin karo inaadan ku bixin doonin iibsiyada yaryar ee la ururiyey muddo dheer oo leh dulsaar.
Kaararka amaahda ayaa ah gaadiidka ugu weyn ee dhibcahaaga deynta lagu dhisay laguna hayo, markaa daawashada kharashaadka amaahda waxay la socotaa kormeerka dhibcahaaga deynta.
Haddii aad waligaa rabto inaad hesho heshiis ijaareed, amaah guri, ama nooc kasta oo maalgelin ah, markaa waxaad u baahan doontaa warbixin amaah oo adag. Waxaa jira dhibco dhibco kala duwan oo la heli karo, laakiin midka ugu caansan waa dhibcaha FICO
Samaynta dardaaranka waqtiyada casriga ah waa la hoos maraa. Hubi in hantidaada la ilaaliyo oo ay dhacdo xaalad degdeg ah oo aan lagugu helin, inay awoodi doonaan inay helaan lacagihii aad urursatay muddo ka dib.
Waxa kale oo aad u samayn kartaa ammaanooyin oo aad u samayn kartaa caymiska qoyskaaga si aad u hubiso in la daryeelo haddii ay dhacdo dhimashadaada.
Qalinjabiye ahaan, waxaa laga yaabaa inaad leedahay deymo dib -u -dhac ah oo ay ugu wacan tahay amaahda ardaygaaga. Ka fiirso dhowr qorshe dib -u -bixin oo kaa caawin kara inaad deynta ardaygaaga si joogto ah oo sahlan u bixiso.
Haddii aad ku dheggan tahay dulsaar sare, markaa bixinta maamulaha si dhaqso leh ayaa macno samayn karta.
Markaad lacag bixinayso, sidoo kale xusuusnow in mustaqbalka dhow laga yaabo in lagaa rabo inaad hawlgab noqoto. Cilmi -baaristu waxay muujisay inaad u baahan tahay 80% mushaarkaaga hadda si aad u hesho hawlgab raaxo leh.
Ha dhididin in kastoo, waxaad samayn kartaa inta ugu badan ee aad hadda awooddo. Dhig wax yar oo aad awoodid markaad awooddo laakiin aad uga dhab ah inaad wax yar dhigto. Waqti yar gudaheed, waxaad arki doontaa sida qaddarrada yaryar u koraan waqti ka dib.
Isku day inta aad awooddo si aad u kordhiso jebinta cashuurta. Adigoo sare u qaadaya keydinta canshuurtaada, waxaad xoreyn doontaa lacag lagu maalgelin karo dhimista deymihii hore, ku raaxaysiga hadda, iyo qorshooyinkaaga mustaqbalka.
Isku day inta aad awooddo si aad weli u haysato rasiidhada cashuur -dhimistaada iyo dhibcahaaga. Xooga saar inaad ka faa'iidaysato cashuur -dhimis kasta iyo deyn la heli karo, iyo sidoo kale inaad go'aan ka gaarto labada marka loo baahdo.
Haddii aad ku adkaysan karto yoolalkaaga maaliyadeed ee gaarka ah adiga oo si habboon u miisaamaya oo u qorshaynaya, waa inaad mar uun ka baxdaa aaggaaga adag si aad naftaada u hesho wax fiican.
Tan waxaa ka mid noqon kara cunno wanaagsan ama naftaada oo dhar cusub gasho.
Markaad sidan samayso, naftaada ayaad dhiirigelin doontaa oo hubin doontaa inaad ku raaxaysato midhihii shaqadaada
Haddii waxyaalahan oo dhami kugu daalaan, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad shaqaalaysiiso qof kuu sameeya kuwan. Waxaad ku samayn kartaa koonto dilaalnimo waxaadna bixin kartaa qorsheeye maaliyadeed shaqsiyeed oo shahaado ah si uu waxyaalahan oo dhan kuugu sameeyo.
Habkaas uma baahnid inaad ka walwasho maxaa yeelay isagu wuxuu mas'uul ka noqon doonaa qorsheynta iyo istiraatiijiyad habboon.
Akhri: Dib-u-eegista Wealthbar Vs Wealthsimple 2021: Goobta Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee Ugu Fiican
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku baran karto maaliyadda shaqsiga. Waxaad haysataa ikhtiyaarro badan sidaa darteed waa muhiim in ka hor intaadan dooran, aad ogaato waxa sida ugu fiican kuugu shaqeeya.
Haddii aad haysato lacag aad qarashgareyso, waxaad tixgelin kartaa inaad hesho shahaadooyin maareynta maaliyadda shaqsiga ah. Waxaad kaloo dooran kartaa inaad ku sameyso internetka. Tani gabi ahaanba adiga ayay kugu xiran tahay.
Qaar ka mid ah siyaabaha aad wax uga baran karto maaliyadda shaqsi-
Dunida maanta, waxaad ku baran kartaa ku dhawaad ​​wax kasta oo onlayn ah. Blogyada internetka waa hab fiican oo wax looga barto dhaqaalaha shaqsiyeed iyo sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo.
Bogagga internetka, waxaad si sax ah uga baran doontaa caqabadaha ay dadka dhabta ahi wajahayaan iyo sida ay u wajahayaan caqabadahaas.
Qaar ka mid ah baloogyada intarneedka ee bixiya aragti qoto dheer iyo meesha aad ka baratid maaliyadda shaqsiga ayaa ah- Mr. Money Mustache, CentSai, Million Mile Secrets, iyo The Points Guy.
Boggagan internetka waxay ku siinayaan talooyin kala duwan oo ku saabsan sida aad u maareyn karto dhaqaalahaaga. Waa inaad gebi ahaanba ka faa'iidaysataa.
Maktabaddu waxay haysaa macluumaad badan oo laga heli karo buugaagta. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa hab aad ku heli karto waxaad raadineyso.
Qaar ka mid ah buugaagta aad fiirin karto inta aad maktabadda ku jirto oo ku siin kara aqoonta aad raadineyso ayaa ah- Waxaan ku bari doonaa inaad taajir noqoto, Milyaneerka Albaabka xiga, Lacagtaada ama Noloshaada, iyo Aabbaha Taajirka ah ee Aabbaha ah.
Noocyada maaliyadeed ee shaqsiyadeed sida Maaliyadda Shakhsiyeed ee Dummies, Isugeynta Lacagta Guud, Buugga Yar ee Maalgelinta Dareenka Guud, iyo Ka fikir oo Kobci.
Fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta markaad akhrinayso buugaagtan si aad u hubiso inaad ka faa'ideysato.
Waxaa jira fasalo internet -ka qaarkood oo lacag la'aan ah oo qaata koorsooyin ku saabsan maaliyadda shaqsiga. Waxaad ka eegi kartaa EdX, oo ah madal barashada onlaynka ah oo ay abuureen Jaamacadda Harvard iyo Machadka Teknolojiyadda Massachusetts.
Waxay bixisaa ugu yaraan saddex koorso oo daboolaya maaliyadeed shaqsiyeed: “Sida Lacag Loo keydiyo: Samaynta Go’aanno Maaliyadeed oo Casri ah” oo ka socda Jaamacadda California ee Berkeley, “Maaliyadda Shakhsiyeed” oo ka socota Jaamacadda Purdue, iyo “Maaliyadda Qof walba: Aaladaha Smart ee Go’aan-Qaadashada ”Oo ka tirsan Jaamacadda Michigan.
Waxay ku bari doontaa inta badan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inaad u baratid maaliyaddaada shaqsiyeed.
Podcasts waa hab fiican oo lagu barto sida loo maareeyo lacagtaada. Waxa ugu quruxda badan ee ku saabsan podcast -ka ayaa ah inaad casharrada u qaadan karto meel kasta. Waxaad dhegeysan kartaa hadal khabiir ku saabsan maaliyadda shaqsiga ah markaad u socoto shaqada iyo xitaa qubeyska.
Waa inaad diyaar u tahay inaad wax ka barato podcast -ka si aad awood ugu yeelatid inaad wax ka soo saarto.
Akhri: Blogyada Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee ugu Fiican: La cusbooneysiiyay 2021
Miyay xun tahay haddii aanan haysan maaliyad shaqsiyeed?
Haa. Waxaa muhiim ah inaad aqoon u leedahay maaliyaddaada shaqsiyeed si aad u hubiso inaadan ku dhicin lacagtaada isla marka aad hesho.
Miyuu maaliyad shaqsiyeed micnaheedu yahay anigu ma bixin karo?
Maya. Waa inaad ka taxaddartaa kharashaadkaaga oo iska ilaalisaa deymaha.
Miyuu maaliyad shaqsiyeed macnaheedu yahay inaan bakhayli ahay?
Sidee ugu fiican baan u maamuli karaa maaliyadayda gaarka ah?
Ka fogaanshaha deymaha iyo maalgelinta joogtada ah ayaa ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu maareyn karo maaliyaddaada gaarka ah.
Ma heli karaa maaliyad shaqsiyeed lacag la'aan?
Maya. Waxaad u baahan tahay lacag si aad middaas u samayso.
"Maaliyadda Shakhsiyeed waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan, laakiin waxaa lagu soo koobi karaa miisaaniyad -dejin, dejinta kharash -garaynta iyo kaydinta mudnaanta, qorsheynta socodsiinta lacagta caddaanka ah, iyo si karti leh u kordhisa faa'iidooyinka barnaamijyada abaal -marinta." - Anthony G. Lanza, Maareynta Maalgashiga Spectra
Maaliyadda shaqsiyeed aad bay muhiim u tahay oo haddii aad lacag leedahay, waa inaad aqoon u leedahay.
Shirkadaha Maaliyadeed ee Shaqsiyadeed ee ugu sarreeya 2021
Shirkadaha Maaliyadeed ee ugu sarreeya ee Macaamiisha 2022
Shaxda Tusmada Qari Waa maxay maalgelinta macaamilka? Waa maxay shirkadda maaliyadeed ee macaamiisha? Noocyada shirkadaha maalgelinta macaamiisha
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Kaarka Virtual Waa maxay Kaarka Debit ka Virtual?Waa maxay Credit Virtual…
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Maareynta Ganacsiga Horumarinta Xirfadaha Maareynta Muhiimka ah1. Fursadaha Shaqooyinka2. Noqo…
Tusmada Tusmada Qari Waa Maxay Ganacsiga Yaryar?Waa Maxay Maareynta Ganacsiga Yaryar?1. Abuur Qorshe Ganacsi2. Kala duwan…